Amara Castro Cid. Ajụjụ ọnụ onye edemede nke Na nke a na achicha | Akwụkwọ dị ugbu a
Amara Castro Cid. Ajụjụ ọnụ onye edemede nke Na nke a na achicha
Foto: Amara Castro Cid webụsaịtị.
Amara Castro Cid, site na Vigo, anọwo na ụwa agụmagụ obere oge, mana enweelarị ihe ịga nke ọma na akwụkwọ akụkọ ya bipụtara ugbu a, Oge zuru oke na nke a Na nke a na achicha. Na nke a Ajụjụ ọnụ Ọ gwara anyị ntakịrị banyere ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Enwere m ekele maka oge gị na obiọma gị.
Amara Castro Cid - Ajụjụ ọnụ
AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ: Akpọrọ akwụkwọ akụkọ ọhụrụ gị aha Na nke a na achicha. Kedu ihe ị na -agwa anyị gbasara ya ebee ka echiche si malite?
AMARA CASTRO CID: Na nke a na achicha Ọ bụ akwụkwọ akụkọ ezinụlọ, ọbụbụenyi, ịhụnanya na nkwalite. Ọ bụ akụkọ banyere nwa agbọghọ, Mariana, onye na-alaghachi na obodo ya Vigo ka ọ gbakee n'ihe a ihe mberede. Nna ya, ụmụnne ya nwoke, ọkà n'akparamàgwà mmadụ, ya physiotherapist ... niile ga-abụ oké mkpa agwa maka ọgwụgwọ, ọ bụghị naanị anụ ahụ kamakwa mmetụta uche. Isiokwu dị n'okpuru bụ usoro iru újú, ma ọ bụ akwụkwọ dị mma ma dị nro nke a na-agụ na obi ụtọ na nke, dị ka ndị na-agụ akwụkwọ si kwuo, nko site na mbu.
Echiche ahụ gbawara agbawa. Ana m etinye uche pụrụ iche mgbe niile otú ọnwụ onye anyị hụrụ n’anya si emetụta anyị. Ọ bụ ihe anyị niile ga-eche ihu n'oge ụfọdụ na anyị adịghị njikere. Ihe na-akpalite itinye nchegbu m na akwụkwọ bụ otu ụbọchị ahụ agbawara m otu iko na kichin n'ụlọ. Enwere m mmasị n'ebe ọ nọ n'ihi na ọ nọnyeere m ndụ m dum, nke ikpeazụ n'ime mmadụ isii, onye lanarịrị nke bịara na njedebe n'ihi mgbagwoju anya m. Ahụrụ m onwe m ka m na-ebuli iberibe iberibe akwụkwọ ahụ ma na-edobe ha nke ọma n'ime ahịhịa. Enyere m ya okwu ekele ole na ole, olili ozu dum maka ihe dị mfe. Ma ọ dị mma ime ya, ọ na-ebelata ihe mgbu. Mma ntọn̄ọ ndikere mban̄a enye ihe mgbu na-ebute mfu mgbe enweghị ike ịla n'iyi na n'oge ahu ka amuru ya Na nke a na achicha.
AMC: Mgbe m dị obere ka m dị na-arịakarị ọrịa na m na-echeta na akwa akwa na akwụkwọ n'aka ruo ogologo oge m nwere ike icheta. Nke mbụ, nchịkọta akụkọ masịrị m. Miniclassics. Mgbe ahụ bịarutere Michael Ende na agwa nke Jim bọtịnụ. Na dị ka akwụkwọ nke otu ogologo, Ọkachamara nke Oz O mere m anwansi ya, na-eme ka m nwee mmasị ịgụ ihe iji soro m ruo oge ndụ m niile.
Akụkọ mbụ m dere echeghị m. Mgbe m bụ nwata, ọ na-amasị m ide ma na-eme ya kwa ụbọchị. M si n’ụlọ na obodo pụọ ọtụtụ oge n’oge ndụ m niile, amaghịkwa m mgbe m chefuru akwụkwọ ndetu nwata m. Na nso nso a Achọtara m akụkọ na ụbọchị de 1984, ya bụ, n'ime afọ 9 m. Ọ pụghị ịbụ cheesy karịa. Otu nna kọrọ akụkọ nye ụmụ ụmụ ya na ọkụ ọkụ nke ọkụ. Enwere burrito na-ekiri site na windo, nwamba dị nro dị nro n'apata nna ochie, na, n'ezie, nne nne na-ahụ n'anya nke na-esi nri muffins maka tii ehihie enweghị ike na-efu.
AL: Ọ bụkwa onye isi edemede a?
AMC: Aha ya bụ Laura Esquivel bụ mgbe mbụ na ndepụta site Dị ka mmiri maka Chocolate, akwụkwọ akụkọ kacha amasị m; Isabel Allende, nụkwa, karịsịa nke ọrụ mbụ ya; Rani Manicka, maka akara o ji hapụ m Nne osikapa; Susana López Rubio kwuru, onye ọ dịghị mgbe ike gwụrụ m ịkwado; Juan Jose Millás, nna ukwu; Cristina Lopez Barrio, site n'ike nke ụdị akụkọ ya ji jide m; Sunday Villar, mmadụ ibe m, onye ode akwụkwọ mara mma nke m masịrị m nke ukwuu; José Luis Martin Vigil, n'ihi na etinyere m oge ntorobịa dị ka onye na-agụ akwụkwọ nke ukwuu; ma achọghị m ịkwụsị ikwu okwu Eloy Moreno, ọ bụghị naanị n'ihi egwu ya kamakwa n'ihi na ọ bụlarị m akara na ntachi obi iji nweta nrọ nke ide ihe.
AMC: Ọ ga-amasị m izute Tara westover, ode akwụkwọ na protagonist nke Nkuzi. Ọ gaara abụ ihe ùgwù mepụta John Brown, Second agwa nke Dị ka mmiri maka Chocolatenke Laura Esquivel dere.
AMC: Enweghị m ike ịbụ maniac na ihe kachasị njọ bụ na nke a na-akawanye njọ na afọ. M na-anakọta niile ahụkarị manias nke ndị na-agụ na ndị na-ede akwụkwọ, ma m ga-agwa gị ntakịrị ihe nkeonwe. Mgbe m na-ede, m na-enwekarị Playmobil ole na ole na tebụl. Ihe ka ọtụtụ bụ ndị si na akwụkwọ akụkọ m na-arụ ọrụ na ya, mana mụ na mmadụ abụọ ọzọ, Krit na Saịprọs, ndị nwere ike ịgụ akwụkwọ. Na-enweghị ha, anaghị m elekwasị anya. Ọ bụrụ na mmadụ achọọ ime ka ndụ m ghara ikwe omume, nanị ihe ha ga-eme bụ izobe ya, ha ga-emerikwa n’agha ahụ.
AMC: Ọ dịghị oge ka m mma karịa anọ ma ọ bụ ise n'ụtụtụ, mgbe ihe niile gbachiri nkịtị. Buru n'uche na Anọ m n'okporo ámá ndị ji ụkwụ aga, bụ́ nke kacha ere ahịa na Vigo, ma ọ dịghị mfe itinye uche na onye na-agụ opera n'okpuru windo gị ma ọ bụrụ na mgbe ọ na-ahapụ gị na-eji oge dị jụụ, jide n'aka na onye na-agụ egwú, onye na-agụ egwú ma ọ bụ onye na-agụ egwú ga-abịa n'oge na-adịghị anya. Ọ bụrụ na ọ nweghị onye nwere decibel zuru oke, ọ bụ n'ihi na ihe ngosi na-aga ịgafe, ngagharị iwe ma ọ bụ oge eruola ịga amụnye ọkụ Krismas. Ọbá akwụkwọ bụ ebe mgbaba m, mana enweghị m ike iji ihe mkpuchi rụọ ọrụ. Enwere m olileanya na m ga-alọghachi ngwa ngwa.
Na a pụrụ nnọọ iche ebe m mmasị ide bụ granary nke ụlọ nne na nna m. Ejiri m ya dị ka ụlọ ọrụ okpomọkụ na ọ bụ ebe mara mma ide.
AMC: Ọ na-amasị m ịga interleaving ụdị na agụ ihe. N'oge ederede, na echiche nke mbipụta, m na-ekwesị ntụkwasị obi karịa nke m n'ihi nke "onye na-akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ, na akpụkpọ ụkwụ gị", ma ana m edebekwa ihe nzuzo ole na ole na drawer. Kedu onye maara ma otu ụbọchị ...?
AMC: Ana m agụ Nwanyị furu efu, na Lucinda riley. Ọ bụ akwụkwọ nke asaa na saga nke Sistersmụnne nwanyị asaa. Ahụrụ m ha niile n'anya. Eji m akpịrị agụ nke a n'ihi na onye dere ya hapụrụ anyị n'afọ a n'ihi ọrịa kansa. Nwa agbọghọ, nke nwere ọmarịcha ọrụ yana ọtụtụ ihe ị ga-agwa… Enweghị m ike ikwenye na nke a ga-abụ akụkọ ikpeazụ m gụrụ nke Lucinda Riley, yabụ m na-agbalị ịkwaga nwayọ, achọghị m ka ọ gwụ.
Oteela aka kemgbe Amalitela m ide akwụkwọ akụkọ m nke atọ. Maka ugbu a Enweghị m ike ikpughe ọtụtụ iheAga m agwa gị na aha onye isi bụ Rita na etinyekwara ya Galicia, dị ka akwụkwọ akụkọ m gara aga. M obi ụtọ dị ukwuu Site na oru ngo a, ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ, echiche nke ịghara ịrụ ọrụ ahụ na-emetụ m n'ahụ, nke ka ukwuu n'ihi na m bụ mmadụ na, dị ka nke a, enwere m egwu nkịtị nke onye ọ bụla ọzọ ga-enwe. Daalụ, anaghị m eme ọsọ ọsọ. A na m akwado usoro nke ọ bụla ọ na-atọkwa m ụtọ ịgagharị n'ọsọ nke m.
AMC: M malitere dị ka onye edemede onwe ya na 2017. Aghọtara m na ọrịa na-efe efe abawanyela nke ukwuu n'ụzọ a nke ịmalite ọrụ na-enwu, ma n'oge ahụ, ọ bụghị ọtụtụ n'ime anyị, ọ gara nke ọma ekele titanic mgbalị Kedu ihe m jisiri mee maka nkwalite. Otú ọ dị, amaara m na ọ bụghị otú a ka m chọrọ isi gaa, sitekwa n'akwụkwọ akụkọ nke abụọ, enwere m iwe karịa. Ụbọchị Maeva kwadoro ihe odide m, m ga-echeta ya mgbe niile dị ka otu n'ime obi ụtọ kachasị na ndụ m. Ugbu a, anọ m ebe m chọrọ ịnọ. Ị nweghị ike ịrịọ maka ndị ọzọ.
AMC: Echere m na, n'ókè ma ọ bụ nke nta, anyị niile dị iche, dị iche na ndị anyị bụbu tupu ọrịa ahụ. Onwe ya, Ọ ka na-esiri m ike ịhapụ ụlọ ọzọ mara m ahụ́. Ka anyị kwuo na m ka na-ata ahụhụ site na mkpọchi mkpọchi nke uche, ihe niile dị m anya nke ukwuu. M na-apụkwa, ee, mana ejiri m mbọ ụfọdụ na-eme ya. Aghọwokwa m onye na-enweghị ike ile akụkọ akụkọ n'anya mmiri na-agbaghị m n'anya. Echere m na ihe a niile ga-ahapụ akara ya na akụkọ n'ọdịnihu, ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Amara Castro Cid. Ajụjụ ọnụ onye edemede nke Na nke a na achicha
Ahụ kacha mma nke Axlin